बुटवलमा पौडेलको ‘ह्याट्रिक’ | Mechikali Daily
बुटवलमा पौडेलको ‘ह्याट्रिक’
Posted By: मेचीकाली डेस्कon: २४ मंसिर २०७४, आईतवार ०७:१०
बुटवल, । हरेक पटकको निर्वाचनमा चर्चामा आउने एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेल यस पटक फेरि चर्चामा आएका छन् । जिल्लामा लगातार तीन पटक चुनाव जितेर ‘ह्याट्रिक’ गरेपछि पौडेलले जिल्लामै इतिहास रचेका हुन् । शनिबार राति सम्पन्न मत गणनाको अन्तिम परिणामअनुसार रूपन्देही क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार पौडेलले प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका युवराज गिरीलाई भारी मतान्तरले पराजित गरी राष्ट्रिय स्तरमै चर्चामा आएका छन् । यो समाचार तयार पर्दासम्म औपचारिक घोषणा हुन बाँकी छ ।
पौडेलले २०६४ र २०७० को संविधानसभा निर्वाचन पनि जितका थिए । २०६४, ०७०, ०७४ का तीन वटै निर्वाचन लगातार जितेर पौडेलले बुटवलमा आफ्नो दवदबा कायम राखेका छन् । बुटवल एमालेको गढको रूप चिनिन्छ ।
स्याङ्जामा जन्मिएका पौडेल २०५६ सालको आमनिर्वाचन यता बुटवल र आसपासको क्षेत्र समेटिएको निर्वाचन क्षेत्रबाट लगातार उम्मेदवार बन्दै आएका छन् । २०६४ सालमा संविधानसभाको चुनाव जितेयता उनी लगातार बुटवलमा आफ्नो किल्ला जमाउन सफल भइरहेका छन् ।
दोस्रो संविधान सभामा माओवादीलाई तेस्रो स्थानमा छाडेर पौडेल कांग्रेसका उम्मेदवारसँग थोरै मतान्तरले विजयी भएका थिए । २०७० सालको संविधानसभाको चुनावमा पौडेलसँग भिड्न तत्कालीन माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई बुटवल आएका थिए । नेपाली कांग्रेसका त्यतिबेलाका उम्मेदवार सूर्यप्रसाद प्रधानलाई ६ हजारको अन्तरले पराजित गर्दै पौडेल तत्कालीन रुपन्देही तत्कालीन क्षेत्र नम्बर ३ बाट दोस्रो पटक विजयी भए । त्यसअघि २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि उनी यहीँ क्षेत्रबाट विजय भएका थिए ।
पहिलो पटक बुटवलबाट ०५६ सालमा तत्कालीन रुपन्देही ३ मा चुनाव लड्दा पौडेल कांग्रेसका प्रधानसँग पराजित भएका थिए । २०५१ सालमा पाल्पाबाट पनि पौडेल निर्वाचित भएका थिए । ४ पटक संसदीय निर्वाचनमा जित हाँसिल गर्न सफल पौडेल जलस्रोत, रक्षामन्त्री र अर्थमन्त्री भैइसकेका छन् । उनी मन्त्री हुँदा जिल्लामा ठूलाठूला विकास निर्माणमा कामहरू समेत भएका छन् ।
पौडेलको क्षेत्रमा पर्ने पर्ने ३ वटै स्थानीय तहमा गत असारमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेले प्रमुख र उपप्रमुखसहित सबै वडाहरूमा जित हासिल गरेको थियो । क्षेत्र नम्बर २ मा बुटवल उप–महानगरपालिकाका १ देखि १३, तिलोत्तमाका १ देखि ६ र सैनामैनाको १ देखि ४ सम्मका वडाहरू पर्छन् ।
पौडेलले रूपन्देहीमा विकाशको लहर ल्याएर यस क्षेत्रमा लोकप्रिय नेताको छवि बनाएका छन् । पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा रूपन्देहीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बुटवल भैरहवा ६ लेन बाटो र बुटवलमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलगायतका विकासका आयोजनाहरू अगाडि बढेका छन् ।
नेता पौडेल विजयी भएको क्षेत्र नं. २ को दुवै प्रदेशसभामा एमालेकै उम्मेदवारहरु विजयी भएका छन् । प्रदेशसभा २ (क) मा उम्मेदवार बनेका लिला गिरीले आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई फराकिलो मतले हराएका छन् । गिरीले प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका काजीमान श्रेष्ठलाई दोब्बर भन्दा बढी मतान्तरले पछाडि पार्दै जित निकालेका हुन् । गिरी एमालेका केन्द्रीय सदस्यसमेत हुन् । त्यस्तै प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर २ (ख) मा एमाले पूर्व जिल्ला अध्यक्ष भोजप्रसाद श्रेष्ठ विजयी भएका छन् । श्रेष्ठले प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका महेशमान सिंहलाई झण्डै ५ हजार मतले पछाडि पार्दै जित हासिल गरेका हुन् ।
त्यस्तै क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेशसभा (क) वाम गठबन्धनका डा. कृष्ण न्यौपाने र (ख) मा माधव शर्मा पनि विजयी भएका छन् । यो समाचार तयार पर्दासम्म मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले औपचारिक घोषणा गरेको छैन । प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर १ मा बाम गठबन्धनका उम्मेदवार छविलाल विश्वकर्मा प्रतिष्पर्धी अब्दुल रज्जाकभन्दा धेरै अगाडि छन् । यस्तै प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर ३ मा पनि वाम गठबन्धनका उम्मेदवार घनश्याम भुसालको अग्रता कायमै छ ।
यस्तै क्षेत्र नम्बर ४ को प्रतिनिधिसभामा लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा प्रमोद यादव जित नजिक छन् भने क्षेत्र नम्बर ५ मा पनि लोकतान्त्रिक गठबन्धनकै उम्मेदवार भरतकुमार शाहले पनि दोब्बर भन्दा बढी मतले अगाािड छन् ।
बुटवलमा जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्नेलाई अनुदान
२ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार ०१:३९
थप ८ जनामा कोरोना संक्रमण
९ बैशाख २०७७, मंगलवार ०१:४७